बागलुङमा आ-आफनै तालको चुनावी तालमेल ! – ebaglung.com
२०७४ बैशाख २५, सोमबार ०९:१७	Top News, अन्य समाचार, विविध
बागलुङ २०७४ बैशाख २५ । स्थानीय तहको निर्वाचनमा विभिन्न राजनीतिक दलहरु वीचको चुनावी तालमेल आआफनै तालको छ । तालमेलको जेलिगाँठी बागलुङमा मात्र नभएर देशभर नै बुझि नसक्नु छ । ठुला राजनीतिक दलहरु नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, राप्रपा र राष्ट्रिय जनमोर्चावीच कतै को संग भीडन्त छ त कतै उनैवीच लगन गाँठो कसिएको छ ।
बागलुङ जिल्लाको चुनावी एकतापनि त्यो भन्दा फरक छैन । एउटा बान्की यहाँ प्रस्तुत गरौँ, बडीगाड गाउपालिकामा राष्ट्रिय जनमोर्चासंग ताल नमिलेर एमालेको माओवादी केन्द्र संग चुनावी गठबन्धन भएको छ भने निसीखोलामा एमाले र जनमोर्चावीच कार्यगत एकता भएको छ ।
यति मात्रै कहाँ हो र ? बरेङ गाउपालिकामा नेपाली काँग्रेस र माओवादी केन्द्रवीच चुनवामा सहकार्य गरेर जाने सहमति अनुसार माओवादी केन्द्रबाट प्रमुखमा माके र उपप्रमुखमा नेका उमेदवार बनेका छन् । यो गाउपालिकामा नेका र माके वीच भएको चुनावी सहकार्यले त, हदै पार गरेको छ । कुरा के भने, माओवादी केन्द्रबाट प्रमुख पदका उमेदवारले जातै फालेर रुख चिन्ह लिएर चुनाव लडेका छन् ।
जिल्लाको सदर मुकाम रहेको बागलुङ नगरपालिकामा एमाले, जनमोर्चा र राप्रपा वीच चुनावी तालमेल भएको छ भने माओवादी केन्द्रका मेयर र उपमेयरका उमेदवारले पार्टीलाई नै पत्तो नदिएर उमेदवारी फिर्ता लिएर बेताल देखाएका छन् ।
बागलुङ नगरपालिका संग जोडिएको काठेखोला गाउपालिकामा नेपाली काँग्रेसका विरुद्ध एमाले, राप्रपा, राजमो र माओवादीवीच चुनावी एकता बनेको छ ।
यस्तै जैमुनी र गल्कोट नगरपालिकामा एमाले र जनमोर्चा वीच चुनावमा मिलेर जाने सहमति बनेको छ भने ढोरपाटन नगरपालिकामा भने कुने दलको अर्को दलसंग चुनवी तालमेल बनेन । उता तमानखोलामा भने जनमोर्चा र माओवादी केन्द्रवीच चुनावी तालमेल बनेको छ ।